Olee otú dezie iTunes n'ọbá akwụkwọ
Edezi agụnye dị iche ọrụ ahụ pụrụ rụrụ ukwuu n'ime edezi-ezo dị ka renaming ma ọ na-agụnye ihe ka Iṅomi, chikota na Ihichapụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ na otu onye pụrụ ahọrọ dezie ha iTunes ọba akwụkwọ. E nwere ndị akpaka na ntuziaka usoro. Na ntuziaka usoro onye ọrụ n'onwe-enyocha faịlụ ka edited na mgbe ahụ na-emetụta usoro ọ chọrọ. N'ihi na akpaka onye ọrụ na-eji software na-enyere ya dezie ya playlist.
Dezie aka iTunes n'ọbá akwụkwọ
Họrọ iTunes na kọmputa gị, iTunes na-akwado si dị iche iche na kọmputa nsụgharị a ga-adabere na spec na-achọrọ n'oge echichi. Mgbe mmalite iTunes window, họrọ song aha na ị chọrọ ịgbanwe. Right pịa na song wee họrọ "na-track aha" a ga-egosipụta song nkọwa na-na ị chọrọ ịgbanwe, ị nwere ike họrọ ịgbanwe ma ọ bụ na-ahapụ ya. Mgbe n'itinye usoro ị chọrọ họrọ OK na ala nke window.
Edezi nke faịlụ pụkwara mere site chikota na music faịlụ na haziri n'ụzọ. N'oge chikota ọ na-agụnye ihichapụ duplicates na isonye yiri faịlụ. E nwere ụzọ dị iche iche na a na mmadụ nwere ike ikpokọta ma mfe usoro bụ:
Họrọ faịlụ na a esiri-ala menu ga-apụta
Họrọ n'ọbá akwụkwọ nhọrọ na obere menu ga-apụta. Wee họrọ inokota n'ọbá akwụkwọ.
Mgbe ahụ rụchaa
Dezie iTunes n'ọbá akwụkwọ mfe na akpaka na-awụ ọsọ n'ugwu Go
Wondershare TunesGo bụ ngwa na-eji na ngwaọrụ na-enwe ike idezi ma ọ bụ mfe ịnyagharịa iTunes-akpaghị aka. Ọ bụghị a free ngwa ọ na-achọ ka a zụrụ si mmepe. Ha na-enye a ikpe mbipute nke ike-eji maka ụfọdụ oge mgbe nke ọ ga-arịọkwa maka aha iji na-eji. Isi ojiji nke TunesGo bụ na-enye integrated ngwọta ga-enyere jikwaa dijitalụ music na a adaba n'ụzọ.
Edezi na TunesGo bụ ihe dị mfe na-atọ ụtọ usoro ebe otu onye anaghị mkpa iji na-ukwuu ọrụ. E nwere ọtụtụ ndị na-abịa na ngwa banyere edezi; na-adị mfe nyegharịa, idetuo na ngwaọrụ ndị ọzọ site Dọrọ na dobe usoro kpokọta ma ọ bụ hichapụ oyiri ma ọ bụ bibie faịlụ. Na ikpe nke bibiri faịlụ otu onye nwere ike mbụ na-agbalị wughachi faịlụ.
Nzọụkwụ na a ga-sochiri n'oge edezi mgbe eji TunesGo bụ ntakịrị bit mfe ebe ọ bụ na fọrọ nke nta dum ọrụ a na-eme site na ngwa.
Ịkekọrịta iji TunesGo, họrọ song na ị chọrọ ikere òkè si playlist.
Dezie song si playlist mgbe ahụ ị nwere ike ịkọrọ ya na mmadụ mgbasa ozi dị ka Facebook na twitter
Iṅomi nke faịlụ na TunesGo
Iṅomi nke faịlụ site na iTunes ka ngwaọrụ dị mfe iji TunesGo. Họrọ Nyefee music si transfer music peeji wee họrọ music si gị iTunes mgbe ahụ ịdọrọ na dobe na ngwaọrụ. N'ihi na ndị mmadụ na-ahọrọ na-dezie aka ha ka nwere nhọrọ ebe TunesGo adịghị amachi ha edezi usoro n'ihi ya, ọ na-arụ ọrụ dị ka a ngwakọ ngwa.
> Resource> iTunes> Olee dezie iTunes Library